Dhageyso: Khudbadda MW Hore Xasan Sheekh Oo Loo Doortay Isbahaysiga UPD – Goobjoog News
Guddoomiyaha cusub ee xisbigani heysta aqlabiyadda baarlamaanka federaalka Soomaaliya, madaxweynihii siddeedaad ee dalkani mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay madasha ayaa sheegay in Alle uu ka baryayo in amaanada loo dhiibay uusan ku ceebeynin.
Madaxweynihii 8aad ee Soomaaliya Xasan Maxamuud ayaa maanta guddoomiye KMG ah loogu doortay magaalada Muqdisho Isbaheysiga UPD [Union of Peace and Democracy], kaasi oo ay ku midoobeen 3 Xisbi siyaasadeed.
Xisbiyadda ku midoobey Ishabeysiga UPD ayaa kala ah; Daljir, PDP iyo Kut-ladda Horusocod, kuwaasi oo xubnaha ku jira ay isugu jiraan Xilldhibaano iyo Siyaasiyiin mucaarad ku ah maamulka madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediyay.